Vaovao - Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fampisehoana LED lehibe?
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fampisehoana LED lehibe?
1. Ny fampisehoana LED lehibe ety ivelany dia misy fampiratiana LED tokana, ary ny haavon'ny pixel amin'ny ankapobeny dia somary lehibe. Ny famaritana mahazatra dia matetika P6, P8, P10, P16, sns raha oharina amin'ny fampisehoana LED kely, ny tombony amin'ny elanelana be dia be ny vidiny. Ny vidin'ny isaky ny kianja fampisehoana LED eny amin'ny kianja midadasika dia ambany kokoa noho ny fampisehoana LED kely, raha ny efijery lehibe ety ivelany kosa mazàna dia manana halavirana maharitra kokoa, toy ny 8m, 10m, sns., Mijery ny sary eo amin'ny efijery lehibe avy lavitra, tsy hisy fahatsapana "voa", ary mazava ny kalitaon'ny sary.
2. fandrakofana midadasika sy mpihaino marobe. Ny fampisehoana LED lehibe eny ivelany dia apetraka amin'ny toerana somary avo dia avo, ny efijery dia somary lehibe, ny zoro fijerena dia lehibe ihany koa, amin'ny toe-javatra mahazatra, ny lalana marindrano dia zahana amin'ny zoro 140 degre amin'ny horonan-tsary, mbola hita mazava tsara ny sary. izay mahatonga ny efijery LED lehibe mampiseho ny atiny dia afaka mandrakotra sakany midadasika kokoa ary hahatratra mpihaino bebe kokoa. Ity endri-javatra lehibe ity koa dia iray amin'ireo antony mahatonga orinasa maro vonona hisafidy fampiratiana LED lehibe ivelany hanehoana atiny dokam-barotra.
3. Ny famirapiratan'ny efijery dia azo ahitsy ho azy. Ny fampisehoana LED amin'ny efijery lehibe napetraka eny ivelany dia hisy fiatraikany amin'ny toetr'andro any ivelany. Ohatra, ny famirapiratana ety ivelany dia tsy mitovy amin'ny andro misy masoandro sy ny orana, ary raha tsy azo ovaina ho azy ny famirapiratan'ny fisehoana dia ho hafa ny vokany amin'ny toetr'andro, na mihena be mihitsy aza. Mba tsy hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fijerin'ny mpihaino kendrena, ny fampisehoana LED lehibe ety ivelany dia hanana lahasa fanitsiana famirapiratanana mandeha ho azy, izany hoe, arakaraka ny toetr'andro ivelany, ny famirapiratan'ny efijery fampisehoana dia ahitsy ho azy mba hahatratrarana ny fampisehoana tsara indrindra vokany
4, mora tazomina (mazàna dia betsaka kokoa ny fikojakojana aorian'ny fikolokoloana, fa misy koa ny fikojakojana mialoha). Ny vidin'ny fametrahana fisehoana LED lehibe ivelany dia tsy ambany, manomboka amin'ny an'hetsiny ka hatramin'ny an-tapitrisany. Noho izany, ny fikojakojana mora dia tena zava-dehibe amin'ny fampisehoana LED lehibe. Ilaina izany mba hiantohana ny fampandehanana maharitra ny seho. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fisehoana LED lehibe eny ivelany dia azo tazomina aorian'izay, ary ny fampirantiana sasany dia tazomina mialoha sy aorian'ny, mazava ho azy, ny fikolokoloana aloha sy aoriana dia azo tanterahina. Ohatra, Huamei Jucai JA andian-dahatsoratra LED raikitra ivelany dia mety hahatratra ny fikojakojana aloha sy aoriana.
5, haavon'ny fiarovana avo. Ny tontolo ivelany dia tsy azo vinavinaina, miaraka amin'ny mari-pana avo lenta any amin'ny toerana sasany ary andro orana any amin'ny toerana sasany. Noho izany, ny haavon'ny fiarovana ny fisehoana LED lehibe ivelany dia mila ambonin'ny IP65 hisorohana ny ranonorana tsy hiditra amin'ny efijery. Rehefa mametraka dia diniho ihany koa ny fiarovana ny varatra, ny induction anti-static sns.
Raha fintinina, ny fisehoana LED lehibe eny ivelany dia matetika manana ireo toetra voalaza etsy ambony. Mazava ho azy, ny fampisehoana ivelany izay novokarin'ny mpanamboatra fampisehoana LED samihafa dia hanana asa hafa hafa, toy ny fitsitsiana angovo sy ny fanjifana herinaratra. Saingy ireo toetra etsy ambony ireo dia saika ny efijery lehibe LED any ivelany no misy. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana 5G, mino izahay fa ny efijery lehibe ivelan'ny trano LED dia hampivelatra ny fiasa sy fiasa bebe kokoa hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Fotoana fandefasana: Jul-01-2021